रोचक खबर Archives - Dainik Online Dainik Online
एजेन्सी । प्रसूति व्यथा लागेका महिलाहरु सामान्यतया केही दिनदेखि अस्पतालमा भर्ना हुन्छन् । सुत्केरीपूर्व नै महिलाको स्वास्थ्य र पेटको वच्चाको अवस्था हेरेर प्रसूति वार्डमा उपचार हुन्छ । तर, न्युजिल्यान्डकी एक
विमानमा चरा ठोक्किनुलाई राम्रो मानिँदैन। चरा विमानमा ठोक्किए त्यसले विमानमा क्षति पुग्ने र उड्दा विमानमा समस्या देखिने बताइन्छ। यही कारण विमानस्थलमा चराको रोकथाम गर्न कर्मचारीहरु खटाइएको हुन्छ। नेदरल्यान्ड्सको एम्सटरड्यामको एक
‘ब्ल्याक एरियन’ बन्न शरीर कुरुप बनाइसकेका एन्थोनीले फेरि काटे दुई औंला!
कार्टुनको पात्र ‘ब्ल्याक एलियन’ जस्तै देखिन फ्रान्सका ३३ वर्षका एन्थोनी लोफ्रेडोले आफ्नो शरीर बिगारिसकेका छन्। उनले कुरुप देखिन शरीरभर ट्याटु खोपेका छन्, नाक र ओठ काटेका छन्। ठाउँठाउँमा पियर्सिङ गरेका
भाइरल चित्रकी अफगान बालिका ४८ वर्षकी भइन्, अहिले इटालीमा शरण पाइन्…
सन् १९८५ मा नेसनल जियोग्राफीक पत्रिकाको कभरपेजमा एक बालिकाको तस्बिर छापिएको थियो। मनमोहक आँखाका कारण उनको तस्बिर अझैपनि चर्चामा आउने गरेको छ। त्यसबेला १२ वर्षकी सर्बात गुला अहिले ४८ वर्षकी
अस्ट्रेलियामा फोहोर कार कुदाउनेलाई दुई लाख जरिवाना
अस्ट्रेलियामा फोहोर कार कुदाउनेलाई जरिवाना हुने भएको छ। अस्ट्रेलियन संचारमाध्यमका अनुसार फोहोर कार कुदाउने, समयमा कारको सफाइ नगर्नेलाई नयाँ सडक कानुन अनुसार ४६४ अमेरिकी डलर ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ।
किम जोङ उनको स्टाइल चोरेको भन्दै उत्तर कोरियामा छालाको ज्याकेटमा प्रतिबन्ध!
उत्तर कोरियाले त्यहाँका जनतालाई छालाको ज्याकेट लगाउनबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ। छालाको ज्याकेट सर्वोच्च नेता किम जोङ उनको सबैभन्दा मनपर्ने ज्याकेट हो। उनी जहाँ जाँदा पनि प्रायजसो छालाकै ज्याकेटमा देखिन्छन्। तर
चर्चित नेता लालु यादवले गाडी चलाएको भिडिओ भाइरल, भने: हामी सबै ड्राइभर
बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा राष्ट्रिय जनता दलका अध्यक्ष लालु यादव भारतभर चर्चित नेता हुन्। उनले गर्ने रमाइलो भाषणका कारण उनी सँधै चर्चामै रहन सफल भएका हुन्। ७३ वर्षका यादवले हालै
डेढ केजी सुँगुरको मासु र साढे ३ केजी प्राउन खाने व्यक्तिलाई रेस्टुरेन्टमा जान प्रतिबन्ध!
चीनमा धेरै मासु खाने एक व्यक्तिलाई एउटा रेस्टुरेन्टले त्यहाँ आउजाउ गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। बीबीसीका अनुसार इन्टरनेटमा खानेकुरा खाएको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने एक चिनियाँ व्यक्तिलाई धेरै खाएको भन्दै एउटा रेस्टुरेन्टले
विवाहलाई यादगार बनाउन बेहुला–बेहुलीको अनेक नखडा, डोरी चुट्टिएपछि यस्तो भयो…
विवाह जीवनको महत्वपूर्ण पाटो हो। जसकारण आफ्नो जीवनको यस अमूल्य समयलाई सम्झन लायक बनाउन मानिसहरु अनेक प्रयास गर्दछन्। विवाहकै सन्दर्भमा हालै इन्टरनेटमा एउटा भिडिओ निकै भाइरल भइरहेको छ। सो भिडिओमा